ch 28 Matthew – 2fish
ekhaya / Bible / YeVangeli kaMateyu / ch 28 Matthew
28:1 Ke kaloku kusasa iSabatha, xa yaqala ukukhula ukukhanya ngoMhla wokuPhumla lokuqala, UMariya waseMagadala nomnye uMariya, waya kubona ingcwaba.
28:2 kwaye qaphelani, kwabakho inyikima enkulu. Kuba kwakuhle isithunywa seNkosi emazulwini, kwaye njengokuba esondela, waqengqela ilitye lesuka emnyango, sahlala phezu kwalo.
28:3 Ke kaloku, imbonakalo yakhe njengombane, kunye vestment yakhe njengekhephu.
28:4 ke, ngenxa yokoyika kwakhe, abalindi uvalo, kwaye zaba ngathi thina singabafileyo.
28:5 Ke isithunywa waphendula wathi kubafazi: "Sukoyika. Kuba ndiyazi ukuba nifuna uYesu, lowo ubebethelelwe emnqamlezweni.
28:6 Akakho apha. Kuba uvukile, kanye njengoko watshoyo. Yizani apha, niyibone indawo apho ubekwe iNkosi.
28:7 Ke ngoku, uhambe ngokukhawuleza, nibaxelele abafundi bakhe ukuthi uvukile. kwaye qaphelani, uya eyandulela ukuya eGalili. Apho ke niya kumbona. ngayo, Ndinixelele ngenxa engaphambili. "
28:8 Bephumile ke engcwabeni ngokukhawuleza, bephethwe luloyiko uvuyo olukhulu, isebenza ukuba imemezele kubafundi bakhe.
28:9 kwaye qaphelani, UYesu wadibana nabo, bathi, "Zukisani." Kodwa Basondela ke bambamba ngeenyawo zakhe, kwaye ke waqubuda kuye.
28:10 Waza uYesu wathi kubo: "Sukoyika. yiya, imemezele ukuba abazalwana bam, ukuze baye eGalili. Apho baya kubona mna. "
28:11 Ke kaloku zakubon 'ukuba zimkile, khangela, kwafika abathile babalindi kuwo umzi, babika neenkokeli ababingeleli konke okwenzekileyo.
28:12 Wahlanganisa kunye nabadala, ukuba icebo, Banika isixa semali eninzi imali amajoni,
28:13 bathi: "Yitsho ukuba bafika abafundi bakhe ebusuku, wemka naye apho, ngoxa besilele.
28:14 Ke ukuba lokusayina esiva ngale nto, thina soyithomalalisa, kwaye uya kukukhusela. "
28:15 ke, nalamkelayo nje imali, enza njengoko ayexelelwe. Kwaye eli gama liye lasasazeka phakathi kwamaYuda, kuzise kule mini.
28:16 Bahamba ke abafundi abalishumi elinamnye, baya kwelaseGalili, kuloo ntaba wayebayalele yona uYesu abebayaleze ngako.
28:17 and, owayembona, bakuba bequbudile kuye, kodwa abanye babethandabuza.
28:18 ke uYesu, iyasondela, Wathetha kubo, bathi: "Lonke igunya Linikwe mna emazulwini nasehlabathini.
28:19 ngoko ke, kuphuma niye kuzenza abafundi zonke iintlanga, nibabhaptizela egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele,
28:20 nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endakha umthetho. kwaye qaphelani, Mna ndinani yonke imihla, kude kube sekuphelisweni kwephakade eli. "